सरकार तानाशाही र निरंकुशतातर्फ उन्मुख– रिजाल - Merodesh.news
१६ असार २०७५ July 1, 2018
विराटनगर, १६ असार । नेपाली कांग्रेसका नेता डा. मीनेन्द्र रिजाल ले संसदका हरेक समितिमा प्रमुख प्रतिपक्ष दलको सहभागिता संविधानमै उल्लेख भए पनि सत्ताधारी दल एकलौटी ढंगबाट अगाडि बढ्न खोजेको आरोप लगाएका छन् ।
सरकारका कानुनमन्त्री शेरबहादुर तामाङले कांग्रेसले संसदीय समितिमा अंश खोजेको भनेर दिएको अभिव्यक्तिप्रति नेता रिजालले कडा आपत्ति जनाए । नेपाल तरुण दल मोरङले विराटनगरमा आयोजना गरेको प्रशिक्षण समारोहलाई सम्बोधन गर्दै रिजाल ले भने, “मन्त्रिमण्डल होइन संसद, त्यहाँ प्रतिपक्ष पनि हुन्छ ।” संविधानमै संवैधानिकसहित अन्य समितिमा प्रमुख प्रतिपक्षको सहभागिता हुने व्यवस्था गरेको उनको तर्क थियो ।
उनले संविधान पढेर मात्रै बोल्न कानुनमन्त्रीलाई रिजालले चेतावनीसमेत दिए । पछिल्ला क्रियाकलापले सरकार तानाशाही र निरंकुशतातर्फ उन्मुख भएको उनको आरोप थियो । उनले सरकारविरुद्ध संघर्षका लागि तयारी अवस्थामा बस्न तरुण दललाई आग्रह गरे । अर्का केन्द्रीय सदस्य गुरुराज घिमिरेले दुई ठूला पार्टी मिलेर नेपालमा कम्युनिज्जम स्थापित गर्ने खेलमा लागेको बताए । उहाँले सरकारका पछिल्ला क्रियाकलाप अभिनायकवादतर्फ उन्मुख भएको बताए । “टेलिभिजनमा पत्रकारले मन्त्रीको सम्पत्ति विवरण सोध्दा कार्यक्रमै बन्द गरिएको छ,” उनले भने, “क्षेत्राधिकार नाघेर गृहमन्त्रीले ठेकेदारलाई जेल हाल्ने धम्की दिइरहेका छन् ।
यो अधिनायकवादको सुरुवात हो ।” उनले काम नगर्ने ठेकेदारलाई कारबाही गर्ने अन्य मन्त्रालय हुँदाहुँदै गृहमन्त्रीले जेल हाल्ने धम्की दिएर तर्साउन खोजेको बताए । कार्यक्रममा केन्द्रीय सदस्य अमृत अर्याल, डा. डिला संग्रौला, आमन्त्रित केन्द्रीय हसन अन्सारी, तरुण दलका केन्द्रीय अध्यक्ष जितजंग बस्नेत, कांग्रेस मोरङका सभापति डिगबहादुर लिम्बू, नेता भक्तिनाथ माझी, अशोक कोइराला, गोपाल राजभण्डारी, प्रदेश सांसद केदार कार्कीलगायतले अब कांग्रेस पुनजागरणको अभियानमा लागेको उद्घोष गरे ।
पार्टी प्रवक्ता विश्वप्रकाश शर्मा, केन्द्रीय सदस्य गगन थापालगायतले सहजीकरण गर्ने प्रशिक्षण दुई दिनसम्म सञ्चालन हुने तरुण दल मोरङका अध्यक्ष संजय थापा प्रभाकरले जानकारी दिए ।